Word တွင် 6x9 စာအိတ်ကိုကျွန်ုပ်မည်သို့ပုံနှိပ်ရမည်နည်း။ - အမြဲမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ
အဓိက > အမြဲမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ > 6x9 စာအိတ် template ကို - ငါတို့သည်အဘယ်သို့ဖြေရှင်းကြဘူး
6x9 စာအိတ် template ကို - ငါတို့သည်အဘယ်သို့ဖြေရှင်းကြဘူး
Word ၌ 6x9 စာအိတ်ကိုကျွန်ုပ်မည်သို့ပုံနှိပ်ရမည်နည်း။
စာပို့ခြင်းဘောင်ပေါ်တွင် Create group တွင်နှိပ်ပါစာအိတ်။
Options ကိုနှိပ်ပါ, ပြီးတော့ the ကိုကလစ်နှိပ်ပါစာအိတ်Options tab ။
ထဲမှာစာအိတ်အရွယ်အစားအကွက်, သင်၏အရွယ်အစားနှင့်ကိုက်ညီသောရွေးချယ်မှုကိုနှိပ်ပါစာအိတ်။ ...
the ကိုနှိပ်ပါပုံနှိပ်ခြင်းOptions tab ။ ...
loadစာအိတ်ပေးတဲ့ dialog box ထဲမှာညွှန်ပြအဖြစ်။
ကမ္ဘာမြေ win7 အင်ပါယာ
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သည် LCI Paper မှ Josh ပါ။ ယနေ့သင့်ကွန်ပျူတာ၊ ပရင်တာနှင့် Microsoft Word သုံး၍ အိမ်တွင်စာအိတ်များကိုအိမ်တွင်ပုံနှိပ်ရန်အဆင့်များအတိုင်းလျှောက်သွားပါလိမ့်မည်။ အိမ်မှာစာအိတ်ပုံနှိပ်ယခုအချိန်ချွေတာနိုင်ပါတယ်ကြောင့်လည်းသင့်ရဲ့လက်ရေးလှကျွမ်းကျင်မှုသို့မဟုတ်သင်သည်အဘယ်သို့ဒီလမ်းကြောင်းကိုသှားလြှငျတစ်လက်ရေးပညာရှင်တရားစွဲဆိုခဲ့ကြလိမ့်မယ်ပေါ် မူတည်. , သင်ပိုက်ဆံကယ်တင်နိုင်ပါ။ လူအများစုသည် 8 1/2 x 11 စက္ကူကိုအိမ်၌ဖြစ်စေ၊ အလုပ်၌ဖြစ်စေပုံနှိပ်ခြင်းကျွမ်းကျင်သူများဖြစ်သည်။ သို့သော်ပုံနှိပ်စာအိတ်များသည်အပိုခြေလှမ်းအနည်းငယ်လှမ်းလိုက်သည်။
ကျွန်ုပ်၏တွဲဖက်ဘလော့ဂ်ဆောင်းပါးသည်သင့်အားအဆင့်များနှင့်ထပ်ဆင့်ထည့်သွင်းစဉ်းစားမှုများအားလုံးကိုပေးသည်။ ထို့ကြောင့်သင်သည်ဤဆောင်းပါးကိုလိုက်နာရန်နှင့်ဤဆောင်းပါးကိုကြည့်ရှုရန်သင့်အားအထူးအကြံပြုလိုပါသည်။ ဤဆောင်းပါး၌51/4 x71/4 စာအိတ်တွင်ပုံနှိပ်ပုံကိုသင်ပြပါမည်။ A7 စာအိတ်အဖြစ်ရည်ညွှန်းသည်။ နာမည်တွေနဲ့လိပ်စာတစ်ခုထုတ်တယ်။ သို့သော်အတူတူပင်အခြေခံမူများနှင့်ညွှန်ကြားချက်များသည်သင်သုံးချင်သောအရွယ်အစားစာအိတ်သို့မဟုတ်အရွယ်အစားသုံးမျိုးသို့မဟုတ်မင်္ဂလာဆောင်စာအိတ်နှစ်ပင်နှင့်သက်ဆိုင်သည်။
အဆင့် ၁ - စာအိတ်ကိုသင်၏ပရင်တာထဲသို့ထည့်ပါ။ ခတ်ပိတ်လိုက်ပါကအစွန်းတိုတောင်းကိုသင်၏ပရင်တာတွင် ဦး စွာထားပါ။ ထို့နောက်ပလပ်စတစ်လျှောလမ်းညွှန်ကိုချိန်ညှိပါ၊ ထို့နောက်စာအိတ်၏ဘယ်ဘက်အခြမ်းနှင့်အတူစီးဆင်းသွားပါ။ အဆင့် ၂: စာရွက်စာတမ်းများကို Word တွင်ထားပါ။
သင်၏စာအိတ်နှင့်တူသောအတိုင်းအတာကို အသုံးပြု၍ စာရွက်စာတမ်းအသစ်တစ်ခုကိုဖန်တီးပါ။ ဤဥပမာတွင်ကျွန်ုပ်၏စာအိတ်သည် ၅ 1/4 အမြင့်ရှိပြီးအကျယ် ၇/၁ လက်မရှိသည်တူညီသောအတိုင်းအတာကိုသတ်မှတ်ပါသို့သော်ဒdecimalမကိန်းဂဏန်းများဖြင့် Word ကြိုက်သည်။ အမြင့် ၅.၂၅ လက်မ၊ အကျယ် ၇.၂၅ လက်မ။
သင်၏ list ည့်သည်စာရင်းမှပထမနှင့်လိပ်စာကိုရိုက်ထည့်ပါ။ တိကျတဲ့ရွေးချယ်ရာတွင်အားဖြင့်စာသား Customize ဤအချက်မှာစာသားကဲ့သို့သင်တို့ font နှင့်ဖောင့်အရွယ်အစားနှင့်စင်တာ။ အရာအားလုံးကသင်ပုံနှိပ်ချင်သောပုံစံကိုကြည့်လျှင်အဆင့်3သို့ကျော်သွားနိုင်သည်။
ပရင်တာဒရိုင်ဘာကိုသွားပြီး၊ စာအိတ်ကိုအမြင့်၊ အကျယ်နဲ့လမ်းကြောင်းကိုထည့်ပါ။ အကယ်၍ သင်သည်သင်၏စာအိတ်ကိုအဆင့် ၁ တွင်မှန်မှန်ကန်ကန်ရေးလျှင်၊ ပရင်တာတွင်သင့်တွင်မိတ္တူပွားစက္ကူ ၈ 1/2 x 11 စာရွက်ရှိမည်ဟုယူမှတ်ထားပြီး၊ သင့်ပရင်တာဒရိုင်ဘာကိုရိုက်ထည့်ရမည် နှင့်ထုံးစံအရွယ်အစား။ သင်၏စာအိတ်ကို ဦး စွာတိုတောင်းသောအစွန်းဖြင့်တင်မည်ဖြစ်သောကြောင့်ဤအကျယ်သည်ပိုမိုတိုတောင်းသောအတိုင်းအတာဖြစ်လိမ့်မည်။ ဤဥပမာတွင် ၅/၄ နှင့်အမြင့်သည်အရှည်အတိုင်းအတာဖြစ်သော ၇ 1/4 ဖြစ်သည်။ ဤအရာအားလုံးကိုပရင်တာဆော့ (ဖ်) ဝဲ (သို့) 'Driver' တွင်ခေါ်ဆိုထားပြီးကွန်ပျူတာနှင့် Mac ညွှန်ကြားချက်များကိုကျွန်ုပ်ဆောင်းပါးတွင်တွေ့နိုင်သည်။
အဆင့် ၄ - စာအိတ် ၁ ခုကိုစာ ၁ ကြောင်းအဖြစ်ပုံနှိပ်ပါ။ နမူနာစာအိတ်တစ်ခုကိုအရင်ပုံနှိပ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အပြင်းအထန်တိုက်တွန်းရခြင်းမှာအကြောင်းပြချက်မှာပုံနှိပ်ထားသည့်စာမေးပွဲရလဒ်သည်သင်၏လိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီမှုရှိမရှိကိုကျွန်ုပ်တို့ကြည့်ရှုရန်ဖြစ်သည်။ ထွက်စောင့်ကြည့်ဖို့အရာနှစ်ခုကိုရှိပါတယ်။
ပထမ ဦး စွာစာသားကိုသင်မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်းပုံနှိပ်ထုတ်ဝေမည်လား။ စာအိတ်ကြည်လင်ပြတ်သားစွာပေါ်စာသားသည်နှင့်ပြည့်နှက်? သတိထားရမည့်နောက်ထပ်အရာ၊ သင်၏ပရင်တာကို ဖြတ်၍ သွားပြီးနောက်စာအိတ်သည်အလွန်ကောင်းမွန်နေဆဲလော။ အချို့သောပရင်တာစာအိတ်ကိုပျက်စီးစေနိုငျသောချွန်ထက်ကွေးရှိသည်။ ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့စာအိတ်နေဆဲအပြစ်ဆိုဖွယ်မရှိသောကြည့်သေချာကြောင်းပါစေ, ကဒီတစ်ခု, တစ်ဦးသည်ပိတ် finish ကိုတစ်ဦးသတ္တု finish ကိုကဲ့သို့သော Matte finish ကိုအထူးအခါသမယရဲ့အထူးသဖြင့်လျှင်, သင်သည်သင်၏ပရင်တာကသင်အသုံးပြုမှုများအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောရှာကြသည်အရည်အသွေးပေးသည်သေချာစေရန်လိုအပ်ပါတယ် ဒီအလုပ်အတွက်ပရင်တာ။ အဓိကအချက် - သင်၏ပရင်တာထဲရှိအမှန်တကယ်စာအိတ်ကိုစမ်းသပ်ခြင်းဖြင့်သာရလဒ်များကိုတွေ့မြင်နိုင်သည်။
အဆင့် ၅ - သင့်စာအိတ်များကို print ထုတ်ပါ။ ကွဲပြားခြားနားသောလိပ်စာများသို့ပေးပို့သည့်စာအိတ်များကိုပုံနှိပ်ရန်နည်းလမ်းနှစ်မျိုးရှိသည်။ ပထမရွေးစရာမှာသင်၏ Word document သို့ပြန်သွားရန်၊ အမည်နှင့်လိပ်စာကိုပြောင်းရန်၊ Microsoft Word ၏ mail merge အင်္ဂါရပ်ကိုအသုံးပြုပြီး tonce လိပ်စာတစ်ခုစီအတွက်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုထပ်မံလုပ်ပါ။ ဒီဆောင်းပါးမှာဒီဆောင်းပါးနဲ့ချိတ်ဆက်ထားပါပြီ။
အိမ်တွင်စာအိတ်ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ သင်၌မေးခွန်းများရှိပါက ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့အားဆက်သွယ်ပါ၊
တစ်ဦး 6x9 စာအိတ်နှုတ်ကပတ်တော်၌ဘယျလိုချေါသလဲ?
ငါလိုအပ်တယ်စကားလုံးနှုတ်ခွန်းဆက်ကဒ်အတွက် template ကိုစာအိတ်9 လက်မအားဖြင့်6လက်မအရွယ်အစား။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်၏သုတေသနသည်မှန်ကန်ပါက၊အဖြစ်လူသိများတစ် ဦး က A10စာအိတ်။မေလ ၂ ရက်၊
တစ်ဦး 6x9 စာအိတ်ကဘာလဲအရွယ်အစားရှိသနည်း
၆ x ၉စာအိတ်6x9လက်မ 5-3 /4x ကို 8-3 /4လက်မ
၉ x ၁၂စာအိတ်9x ကို 12 လက်မ /48-3 /4x ကို 11-3 လက်မ
၁၀ x ၁၃စာအိတ် 10 x ကို 13 လက်မ 9-3 /4x ကို 12-3 /4လက်မ
မင်္ဂလာပါ၊ ဤအရာသည် Marty Carter ဖြစ်ပါသည်။ ဒီကနေ့မှာကျွန်တော်တို့ဟာ Canon imageRUNNER Advanced Series နဲ့စာအိတ်ပုံနှိပ်ခြင်းအကြောင်းပြောနေကြပါတယ်။ စာအိတ်၌ပုံနှိပ်ခြင်းနည်းလမ်းသုံးမျိုးရှိပါသည်။
ငါရှောင်ကွင်းအသုံးပြုသော ဦး စားပေးနည်းလမ်းအကြောင်းကိုပထမ ဦး ဆုံးပြောပါလိမ့်မယ်။ သင်ကကိရိယာ၏ဘေးထွက်အပေါ်ရှောင်ကွင်းဖွင့်နိုင်ပါတယ်။ ဤကိစ္စတွင်ကျွန်ုပ်သည် standard comm 10 envelope ကိုထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်အသုံးပြုသည်။
ဒါကိုဇောက်ထိုးဖြည့်ထားတယ်၊ ဤရွေ့ကားလမ်းပြလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်သင်ရှောင်ကွင်းဗန်းတွေကိုအသုံးပြုတဲ့အခါတစ်ကြိမ်ထက်ပိုမို 10 load လို့မရပါဘူး။ ယခုသင်စဉ်းစားနိုင်သောအခြားနည်းလမ်းနှစ်ခုအကြောင်းပြောသွားပါမည်။
Xbox အမှား 0x82d40007
စာအိတ်များပေါ်တွင်ပုံနှိပ်ရန်နောက်ထပ်နည်းလမ်းမှာ Tray2ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်စာအိတ် ၅၀ အထိတင်နိုင်သည်။ နောက်ဆက်တွဲအေအတွက်ဗန်း ၂ ကိုဖတ်ပါ။
ဗန်း (၂) မှစာအိတ်များကိုပုံနှိပ်သည့်အခါဤပူးတွဲဖိုင်ကိုအသုံးပြုရမည်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့
ထို့နောက်စာအိတ်များကိုဇောက်ထိုး၊ အပေါ်သို့တက်၊ အရှည်နှင့်အကျယ်နှင့်ချိန်ညှိရမည်။ Tray 1 ကို အသုံးပြု၍ Tray 1 ကိုအသုံးပြုပြီး Canon imageRUNNER ဖြင့်စာအိတ်များကိုပုံနှိပ်နည်း။ ၁။ သင် Tray 1 တွင်စာအိတ် ၂၅ ခုအထိပုံနှိပ်နိုင်သည်။
သငျသညျအခန်း 1 နှင့်အတူ2ပူးတွဲမှုလိုအပ်ပါတယ်ဤတွင်လည်းငါတို့ဤ slot နှစ်ခုအတွက်အဖုံးပူးတွဲမှုလိုအပ်ပါတယ်သူသည်သူပစ္စည်းကိရိယာ၏ပေးပို့နှင့်အတူအဖုံးပူးတွဲ B ကိုထောက်ပံ့ပေးလိမ့်မယ်။ ၎င်းကိုစက္ကူလမ်းညွှန်မှတစ်ဆင့်တင်ရမည်။
Tray 1 ကိုသုံးသောအခါကျွန်ုပ်တို့၏စာအိတ်များကိုတင်ပါမည်။ စာအိတ်၏ရှည်လျားသောအစွန်းတက်တတ်၏။ ဒီလမ်းညွှန်ကိုအစွန်းတစ်ဖက်စီတွင် flush ဖြစ်အောင်ညှိပါ။
စာအိတ်များကိုကျွန်ုပ်တို့၏စက္ကူရင်းမြစ်များ၌ထည့်ပြီးပြီဆိုလျှင်အမှန်တကယ်စက္ကူအရွယ်အစားကိုစက်ကိုပြောပြရန်လိုသည်။ လမ်းကြောင်းထဲရှိမည်သည့်ထူးဆန်းသောအရွယ်အစားကိုမဆိုသူအလိုအလျောက်မသိရှိနိုင်ပါ။ ချိန်ညှိချက်များနှင့်မှတ်ပုံတင်ရန်ခလုတ်ချိန်ညှိချက်များ၊ စက္ကူဆက်တင်များနှင့်စက္ကူဆက်တင်များကို ထပ်၍ နှိပ်လိမ့်မည်။
ဤနေရာတွင်အခန်း ၁ နှင့် ၂ သည်စာအိတ်၏ထူးဆန်းသောအရွယ်အစားကိုမမြင်နိုင်ပါ။ Tray 1 ကို Select လုပ်ရန် Envelope Number 10 Envelope ကိုရွေးပါ။ ကျွန်ုပ်တို့လိုချင်သောပုံသေသည်။ လမ်းကြောင်းသည်စာအိတ်ကိုတင်လိုက်သည့်အချိန်နှင့်လိုက်ဖက်သည်ကိုသင်တွေ့နိုင်သည်။ အိုကေ။
အိုကေ။ နှင့်အနီးကပ်။ ယခုကျွန်ုပ်တို့သည်စာအိတ်များကို bypass tray ထဲထည့်ပြီးပါပြီ၊ ၎င်းသည်အနည်းငယ်ပိုမိုလွယ်ကူသွားပါလိမ့်မည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ထိုစာအိတ်များသည် tray ထဲတွင်ရှိနေစဉ်၊ ကျွန်ုပ်ယခုစာအိတ်ထဲသို့ထည့်ပါကစာအိတ်လေးရေးထားသောနေရာကိုရွေးချယ်ရန်သင့်အားတောင်းဆိုလိမ့်မည်။ သင်၏နံပါတ် (၁၀) ကိုထိရန်လွယ်ကူခြင်းကတိုတောင်းသောအစွန်းကိုကျွန်ုပ်တို့ load လုပ်စဉ်က load လုပ်ရန် ok ကိုနှိပ်ပါ။
၆ x ၉ စာအိတ်ပေါ်မှာမင်းပုံနှိပ်လို့ရမလား။
ပရင်တာဒရိုင်ဘာကပြောကြားသည်ဆိုပါက6x9သည် Word တွင်စံသတ်မှတ်ထားသောအရွယ်အစားသာဖြစ်သည်။ မဟုတ်ရင်၎င်းသည်စိတ်ကြိုက်အရွယ်အစားဖြစ်ပြီး၊ Word သည်စိတ်ကြိုက်အရွယ်အစားနှင့်မျှော်လင့်ချက်ကင်းမဲ့ပြီးစံသတ်မှတ်ထားသောအရွယ်အစားကိုလက်ခံလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်စာရွက်စာတမ်းကို format လုပ်ရန်ပရင်တာဒရိုင်ဘာပေါ်တွင်မူတည်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
စာအိတ်တစ်ခုအတွက် template ကိုဘယ်မှာရှာရမလဲ။
Envelope section တွင်၊ သင်သည်အောက်ရှိ Options tab သို့သွားပြီး Envelope size box ကိုနှိပ်ပါ။ သင်၏စာအိတ်နှင့်ကိုက်ညီသောအရွယ်အစားကိုနှိပ်ပါ။ သင်ရှာနေသည့်အရွယ်အစားကိုသင်ရှာမတွေ့လျှင် Custom size ကို နှိပ်၍ အမြင့်နှင့်အကျယ်ကိုထည့်။ စာအိတ်၏အရွယ်အစားကိုရိုက်ထည့်နိုင်သည်။
ဘယ်လောက်ကြီးမားငါက MS နှုတ်ကပတ်တော်၌စာအိတ်စေနိုင်သနည်း
အွန်လိုင်းပေါ်တွင်သာမကစာအိတ်များပြုလုပ်ရန်အတွက်အမျိုးမျိုးသောအစီအစဉ်များတွင်တင်းပလိတ်များစွာရှိသည်။ ထို့အပြင်စိတ်ကြိုက်ဒီဇိုင်းများကိုလည်း MS Word ကဲ့သို့သောပရိုဂရမ်များကိုသုံးနိုင်သည်။ စာအိတ်အရွယ်အမှတ် ၉ (၃.၈၇၅ လက်မ ၈.၈၇၅ လက်မ) Download စာအိတ်အရွယ်နံပါတ် ၁၀ (၄.၁၂၅ လက်မမှ ၉.၅ လက်မ)
စီးပွားဖြစ် ၀ င်းဒိုးအတွက်စာအိတ်ဘယ်လောက်ကြီးလဲ။
ကျွန်ုပ်တို့ကူညီရန်ကျွန်ုပ်တို့ရောက်ရှိနေသည်။ အောက်ဖော်ပြပါကျွန်ုပ်တို့၏ရရှိနိုင်သည့် ၀ င်းဒိုးတင်းပလိတ်များအားကြည့်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့တွင်စီးပွားဖြစ် Window Templates နှင့် Booklet / Catalog Templates နှစ်ခုလုံးရနိုင်သည်။ ပြတင်းပေါက်တိုင်းတာရန်မသေချာ? ဒီမှာအမြန်ပုံကိုကြည့်ပါ။ အမေရိကန်၌စံစာအိတ်အရွယ်အစားစာရင်း၊ တစ်ခုစီအတွက်အများဆုံးအကျယ်အကျယ်စာရင်းကိုလည်းသင်ကြည့်ရှုနိုင်သည်။
Visio သစ်ပုံစံများ - လက်တွေ့ကျတဲ့ဖြေရှင်းချက်
Mac ပေါ်တွင်ထပ်တူပြုခြင်းဝန်ဆောင်မှုဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း။ iSync သည်အက်ပလီကေးရှင်းအက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး ၂၀၀၃ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၂ ရက်နေ့တွင်အက်ပလီကေးရှင်းမှပထမဆုံးဖြန့်ချိခဲ့သည်။ အက်ပဲလ်သည် fusionOne မှအဓိကနည်းပညာကိုလိုင်စင်ချထားသည်။ ၎င်းသည် Mac OS X အောက်တွင်သာအသုံးပြုခဲ့ပြီး Bluetooth သို့မဟုတ် USB ချိတ်ဆက်မှုမှတစ်ဆင့် Apple Book မဟုတ်သည့် SyncML ကိုအသုံးပြုနိုင်သည့်လိပ်စာစာအုပ်နှင့် iCal မှအဆက်အသွယ်နှင့်ပြက္ခဒိန်အချက်အလက်များကိုတစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်ရန်အသုံးပြုခဲ့သည်။
မအောင်မြင်သော Bluetooth ကိုဖယ်ရှားပါ
Sxuptp driver ဆိုတာဘာလဲ။ Sxuptp ။ sys သည် Windows driver တစ်ခုဖြစ်သည်။ driver ဆိုသည်မှာသေးငယ်သည့် software program တစ်ခုဖြစ်ပြီးသင်၏ကွန်ပျူတာအား hardware သို့မဟုတ်ချိတ်ဆက်ထားသော devices များနှင့်ဆက်သွယ်နိူင်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ driver သည် operating system ၏အတွင်းပိုင်း၊ hardware နှင့်တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်နိုင်သည်ကိုဆိုလိုသည်။ free file information forum သည် sxuptp ဟုတ်မဟုတ်ဆုံးဖြတ်ရန်သင့်အားကူညီနိုင်သည်။
Gfwl offline အကောင့် - လက်တွေ့ကျသောဖြေရှင်းနည်းများ
Windows 10 တွင် LifeCam ကိုမည်သို့တပ်ဆင်ရမည်နည်း။ တုံ့ပြန်မှုများ (၄) CD / DVD-ROM drive ထဲမှ LifeCam ဆော့ဝဲလ် disc ကိုထည့်သွင်းပါ။ ထို့နောက် Wizard ကိုစတင်ရန်တပ်ဆင်ခြင်းကိုဖွင့်ပါ။ LifeCam Cinema ၏ USB ကေဘယ်ကိုဆော့ဝဲလ်မှအချက်ပြသောအခါ USB port သို့ချိတ်ဆက်ပါ။ ... Microsoft Lifecam ရုပ်ရှင်ရုံကိုယခု install လုပ်သင့်သည်။